Galkacyo: Dambi-baare Cabdisalaan Cali Saylaan oo ka tirsanaa bilayska Puntland oo xalay lagu dilay Galkacyo. – Radio Daljir
Galkacyo, June 26 – Alle u naxariistee waxaa xalay magaalada Galkacyo lagu dilay sariilka ka tirsanaa dambi-baarayaasha saldhigga ciidanka bilayska ee magaalada Galkacyo kaasoo lagu magaaci jiray Cabdisalaan Cali Saylaan.
Dilka sarkaalkaan waxaa gaystay labo nin oo baskoolada ku hubaysanaa kuwaasi oo baxsaday markii ay dilkaasi fuliyeen, waxaana falkaani uu ka dhacay meel aad ugu dhaw saldhigga bartamaha ee magaalada Galkacyo oo marxuubkaani ka hawlgali jiray.
Wali ma Cadda cidda falkaani gaysatay hase ahaatee waxaa loo malaynayaa in uu xiriir la wadaago dilal isdaba-joog ah oo in muddo ah ka dhacay magaalada Galkacyo kuwaasi oo lala bar-tilmaameedsanayey saraakiisha dawladda iyo wax-ku-oolk kale ee bulshada rayidka ah.
Saraakiisha bilayska magaalada Galkacyo ee maamulka Puntland oo idaacadda Daljir wax ka waydiisay dilka dambi-baarahaasi ayaa sheegay in ay wadaan baaritaan la xiriira sababta iyo cidda falkaan gaystay hase ahaatee illaa haatan aysan hayn hubaasha arrintaasi.
Marxuum Cabdisalaan Cali Saylaan saaka ayaa lagu aasay qabuuraha magaalada Galkacyo waxaana ka soo qayb-galay xabaaliddiisa maamulka iyo dadweyne badan oo reer Galkacyood ah.
Dilka alla ha u naxariistee dambi-baare Cabdisalaan Cali Saylaan, waxaa uu u danbeeyey dilal xiriir ah oo in muddo ah ka dhacayey magaalada Galkacyo kuwaasi oo lagu ugaarsanayey saraakiisha hay’adaha dawladda ee gobolka Mudug iyo indheer-garadka magaalada Galkacyo.
Arrintaan ayaa ku soo beegantay xilli todobaaddadii ugu danbeeyey magaalada Galkacyo laga waday hawl-gallo baaxadleh oo ku saabsanaa adkayna amiga iyo dardar-galin xagga maamulka ah.